Iko kupisa uye kutonhora zvinodikanwa zvemasangano edzidzo uye macampus zvakafara uye zvakasiyana, zvinoda zvakagadzirwa zvakanaka masisitimu ekupa yakachengeteka uye yakagadzikana nharaunda yekudzidza. Airwoods inonzwisisa zvinodikanwa zvakaoma zvechikamu chedzidzo, uye yakawana mukurumbira wakasimba wekugadzira nekuisa masisitimu eHVAC anosangana uye anodarika zvinotarisirwa nevatengi vedu.
HVAC Zvinodiwa Zve Dzidzo Zvivakwa
Kuzvikamu zvedzidzo, kudzora kwemamiriro ekunze kwakanaka hakusi kwekungopa tembiricha yakagadzikana pane nzvimbo, asi nezve kudzora kudzora kwemamiriro ekunze munzvimbo zhinji dzakakura uye diki, pamwe nekugarisa mapoka evanhu vanosangana panguva dzakasiyana dzezuva. Zvekushandisa zvakanyanya, izvi zvinoda network yakaoma yeyuniti inogona kutarisirwa zvakazvimiririra kuti ishandiswe zvakakwana panguva yepamusoro uye yekusiya-yepamusoro nguva. Pamusoro pezvo, nekuti imba izere nevanhu inogona kunge iri nzvimbo yekuberekera hutachiona hunotakura mweya, zvakakosha kuti iyo HVAC sisitimu inosangana neyakaomarara emukati memhando yemhepo zvinodiwa kuburikidza nekubatanidzwa kweanoshanda mweya uye kusefa. Nekuti mazhinji emasangano edzidzo anoshanda pamabhajeti akaomarara, zvakakoshawo kuti chikoro chikwanise kupa nharaunda dzakakwana dzekudzidza uku dzichinyatsogadzirisa mashandisirwo emagetsi ekushandisa.
Imba Yemitambo Horo
PaAirwoods, isu tinokubatsira iwe kugadzira nharaunda neiyo yepamusoro yemukati yemhepo mhando uye yakaderera manzwi emazinga iwe aunoda kune akasununguka, anogadzira dzimba dzekudzidzisa dzevadzidzi, vadzidzisi, uye vashandi, kunyangwe iwe uchishanda K-12 chikoro, yunivhesiti, kana munharaunda koreji.
Isu taizivikanwa nekugona kwedu mainjiniya uye kuvaka tsika HVAC mhinduro dzinosangana neakasarudzika anodikanwa ezvivakwa zvedzidzo. Isu tinoita ongororo izere yeiyo nzvimbo (kana zvivakwa zvakakanganiswa pamusasa), tichifungisisa muzvivakwa, dhizaini, mashandiro uye kugona kweiyo ikozvino HVAC system. Isu tinobva tagadzira sisitimu yekupa yakanakira mamiriro mukati meakasiyana nzvimbo. Matekinoroji edu achashanda newe kuti uve nechokwadi chekuti mafekitori ako ekufema nemhepo anosangana kana kupfuura mwero yemhando yepamusoro yemhepo. Tinogona zvakare kumisikidza smart control yekutarisa masystem ayo anogona kudzora tembiricha munzvimbo dzakasiyana dzakasiyana zvichienderana nekirasi nguva uye saizi, kuti ugone kucheka magetsi emagetsi nekungodziya uye kutonhodza mamwe makamuri sezvavanenge vachishandiswa. Chekupedzisira, kuti uwedzere kuburitsa uye hurefu hwehurongwa hwako hweHVAC, maAirwoods anogona kupa inoenderera yekutarisira uye yekuchengetedza nzira inokodzera mukati memari yako yebhajeti.
Kunyangwe iwe urikuvaka kambasi nyowani kubva pasi kumusoro, kana iwe uri kuyedza kuunza yezvakaitika nzvimbo yedzidzo kusvika kumodhi dzazvino dzekushandisa simba, Airwoods ine zviwanikwa, tekinoroji uye hunyanzvi hwekugadzira nekushandisa mhinduro yeHVAC inosangana neyako chikoro inoda kwemakore mazhinji anouya.
Germany Elementary Chikoro HVAC Solution
Beijing Tsinghua Yunivhesiti
Suzhou Singapore chikoro chepasi rose
Yakabatana kindergarten yeyunivhesiti yeBeijing
Mongolia Hobby International Chikoro